Madaxweyne Shariif oo u hambalyeeyay shacabka, Kana hadlay arrinta Soomaaliland | Radio Muqdisho	Friday, May 24th, 2013	Bogga Hore
Madaxweyne Shariif oo u hambalyeeyay shacabka, Kana hadlay arrinta Soomaaliland
Published on June 25, 2012 by Yusuf · 2 Comments · 3,360 views
Madaxweynaha dowladda Federaalka KMG ah mudane Shariif Sh Axmed ayaa hambalyo ku aaddan 52 guuradii ka soo wareegtay xornimada gobollada woqooyi ee dalkau diray shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Shariif Sh Axmed oo wareysi siiyay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in sanad guuradani ay ku soo aadday xilli ay socdaan wada hadallo u dhaxeeya maamulka Soomaaliland iyo dowladda FKMG ah. Wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliland in ay ka soo dhalaalaan dowrkii ay waligood ku lahaayeen midnimada iyo isu keenidda shacabka Soomaaliyeed.
26-kii Jun ee 1960 ayay gobollada Woqooyi ee dalka ka xoreebeen gumeystihii Ingiriiska, biriina waxaa bilaabanaya toddobaadka xornimada Soomaaliya, oo ay ku jiraan munaasabado badan, sida maalinta xornimada Jabuuti oo ah 27 Jun iyo maalmaha xorriyadda Soomaaliya oo kala ah, 26ka Jun iyo 1 Julay.
faati maxamed says:	June 25, 2012 at 2:43 pm	mashaa aalah waa wax fican lagu farxo guul shariif hanbalyo
Reply »	somali+turkey says:	June 26, 2012 at 9:02 am	masha alah ilahey somalı ha isku keno